कोरोना साइड इफेक्ट : महिलामा लगातार बढ्दो तनाव र समाधानका उपाय | Kendrabindu Nepal Online News
कोरोना साइड इफेक्ट : महिलामा लगातार बढ्दो तनाव र समाधानका उपाय
विश्वमा भइरहेको अध्ययन अनुसार आम जीवनमा तनावको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । कारण हो कोरोना भाइरस र त्यसबाट सिर्जित समस्या । अहिले रोगको डर त छ नै, त्यस्तै लगातार सचेत र सतर्क रहन र सावधानी अपनाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ ।
कोरोनाले मानिसको शारीरिक गतिविधि कम भएको छ र धेरैजसो समय घरमै खर्च भइरहेको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा मनमा मानसिक तनाव हाबी हुन्छ । जसले बहस, चिढचिढाहट, निराशा र क्रोधको जन्म हुन्छ । प्रायः हामी सबै घरबाट बाहिर जान्छौं, साथीहरूलाई भेट्छौं र तनाव कम गर्दछौं, तर अहिले त्यसमा पनि केही अवरोधहरू छन् र यस सीमाले समस्याहरू सिर्जना गर्दैछ, अझ विशेष गरी महिलाको लागि ।
महिलाहरू किन बढी प्रभावित छन् ?
वास्तवमा, महिलाहरू बढी भावनात्मक र संवेदनशील हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू छिटो तनाव लिन्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी, सम्बन्ध, परिवारको बारेमा बढी ख्याल राख्छिन्, उनको दिमागमा धेरै कुराहरु खेलिरहेको हुन्छ । जब तनाव सहनशक्तिबाट बाहिर जान्छ, यसको परिवर्तित रूप शरीर र व्यवहारमा देखा पर्न थाल्छ ।
सन् १९८० भन्दा अघि भावनाहरूको अनियन्त्रित पललाई केवल महिलालाई मात्र हिस्टीरिया भनिने मानसिक रोगको रूपमा लिइन्थ्यो । सिग्मन्ड फ्रायडले यसलाई पत्ता लगाएर परीक्षण गरेका थिए । जो महिलाहरू तनाव, असुविधा र आघात भन्न असमर्थ हुन्छन्, उनीहरुमा शारीरिक लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन्, यसलाई कन्वर्शन डिसअर्डर भनिन्छ ।
धेरै प्रकारका तनाव नै हुन कारण
१. पति र पत्नी बीचको सम्बन्धमा दूरी, कटुताले महिलालाई बढी प्रभावित पार्दछ । यस तनावको असरले धेरै तनावहरू सिर्जना हुन्छन् ।
२. सम्बन्धमा शंका वा पति वा पत्नीलाई पहिलेको जस्तो ख्याल नराख्ने जस्ता निराशाले उब्जेको तनावहरु रोगको कारक हुन सक्छ ।
३. घरेलु कलह, पतिले शारीरिक र मानसिक आवश्यकतालाई गर्ने बेवास्ता, घरमा निरन्तर दुरुपयोग, प्रियजनको मृत्यु, आघात, धनहानी, गम्भीर आघात आदि यो रोगको कारण हुन सक्छ ।
यी लक्षणहरू हुन सक्छन्
१. एकाएक चिच्याउने, चिढचिढे वा छिटो रिस उठ्ने जस्ता सामान्य ब्यबहार
२. अधिक तिर्खा लाग्नु, मुटुको धड्कन बढ्नु, अचम्मको डर पैदा हुनु, सास फेर्न गाह्रो, मांसपेशिको ऐंठन वा अत्यधिक शिथिल हुने लक्षणहरू पनि हुन् ।
३. अचानक जोडले हाँस्ने वा रुनु, चक्कर आउँनु, पेटमा हावाको गोला घुम्ने वा घाँटीमा दबाब महसुस हुनु ।
४. कहिलेकाँही हिच्की आउन सक्ने, तथा हात र खुट्टामा ऐठन हुने र केही अवस्थामा बिरामीहरू बेहोस पनि हुन सक्छन् ।
यद्यपि यो आवश्यक छैन कि यी सबै लक्षणहरू एकैसाथ देखा पर्दछ । लक्षण समस्याको गम्भीरतामा निर्भर गर्दछ । यी अवस्थाहरूमा मनोवैज्ञानिकसँग सल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सुरुवातमै बिचार गर्नु बुद्धिमानी
लामो समयसम्म तनाव कायम गर्नु समझदारी होइन, यसो गरेमा यसले बिस्तारै मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनाउछ । यसले मेमोरीमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
भोक बिस्तारै बिस्तारै कम हुन थाल्छ र भोक नै अन्त्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, समय हुदै रोकथाम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसको उपचार अवस्था अनुसार औषधि, मनोचिकित्सा, परामर्श, सम्मोहन विधि आदिद्वारा गरिन्छ ।
हामी के गर्न सक्दछौं ?
१. यदि कोही परिवारमा धेरै रिसाएको छ, अनौठो व्यवहार गर्दछ भने त्यसलाई नाटकको रूपमा सम्झेर क्रोधित नहुनुहोस् । यसले उसको तनाव झनै बढाउँदछ । उसको समस्या बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
२. यस रोगबाट पीडित व्यक्तिलाई भोक कम लाग्ने हुन्छ, त्यसैले उसको खानपानमा ध्यान राख्नुहोस् । उसलाई हरेक दुई घण्टामा थोरै थोरै खाना दिनुहोस् र सँगै बसेर खानुहोस् ।
३. समस्या व्यक्त गर्न नसक्दा परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने तनाव, असुविधाले भावनाहरूमा त्यस्तो ज्वलन्त समस्या ल्याउँदछ कि पीडितले यसलाई सम्हाल्न असमर्थ हुन्छ र अनौंठो व्यवहार गर्न थाल्छ ।
त्यसकारण कसैलाई पनि भावनाहरू व्यक्त गर्नबाट नरोक्नुहोस्, उसको खिल्ली समेत नउडाउनुहोस्, बरु उसलाई सम्हालेर कुरा गर्न दिनुहोस् । मनको बिकार जान दिनुहोस् ।
covid19, कोरोना साइड इफेक्ट
Prevसुनको मूल्य कति छ आज ?
नेकपा विवाद : ओली-दाहाल आज पनि छलफलमाNext